Indlu eyakhiwe ngamaphenyane epholileyo ngaselwandle - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamaphenyane epholileyo ngaselwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBeinta
Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubuka iziqithi ezisemantla. Le flethi okanye indlu ekwicomplex eyi-50 inekhitshi, amagumbi okulala amabini negumbi lokuhlambela elincinci. Kukho ibhalkhoni ngaselwandle. Unokonwabela indalo, ulwandle kunye neentaba. Ngaphantsi komgangatho kukho umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa impahla nefriji. (Yivule)
Iflethi ibekwe ngaphandle kwedolophu yaseKlaksvík malunga neekhilomitha eziyi-5 ukusuka kwi-centrum, kwindawo ethe cwaka kunye ne-idyllic. Ukuba uvula iifestile, unokuva umlambo okufutshane kunye nolwandle.
Ngaphantsi komgangatho, apho ungena khona kwisikhephe kukho isikhephe sokuloba. Iflethi okanye indlu ekwicomplex iphezulu. Akukho mntu uza kusebenzisa isikhephe ngoxa usahleli, ngaphandle kokuba sikwazisile kwangaphambili.
Kukho izindlu zesikhephe ezimalunga ne-30 ekuhlaleni. Malunga ne-8 ukuya kwi-10 ineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezikwizindlu ezikwisikhephe Kodwa akukho mntu uhlala apha ngokusisigxina. Oku kwenza indawo ithule kwaye ilungele ukuphumla.
Umbuki zindwendwe ngu- Beinta